Daawo Sawirada: Gaari Nuuca fiilooyinka ku socda ah oo shil ku galay Wabi Dushiisa - Hablaha Media Network
Daawo Sawirada: Gaari Nuuca fiilooyinka ku socda ah oo shil ku galay Wabi Dushiisa
HMN:- Gaari nuuca fiilooyinka ku socda ayaa shil ku galay meel afartan mitir ka saraysa wabiga Rhine ee ku yaalada magaalada Cologne ee dalka Jarmalka, waxaana gaariga kasoo laad laadsamay Wabiga dushiisa.
Ciidamada gurmadka deg dega ayaa soo bad baadiyay 75-qof oo rakaab ah kuwaa oo ku xayirnaa gaariga shilka galay saacado badana hawada ka laad laadeen, waxaana dareen cabsi huwan lasoo darsay rakaabka.
Shilkan gaari ayaa la sheegay in uusan wax khasaaro ah ka dhalan lana bad baadiyay dhamaan rakaabkii saarnaa gaarigan fiilada ku shaqeeya, waxaana Sawiro lasoo qaaday muujinayaan caruur iyo haween laga soo dajinayo gaarigan.
Shilkan ayaa la sheegay in ay sababtay ka dib markii gaarigu uu ku dhacay mid ka mid ah tiirashii hayay fiilooyinka uu gaarigu ku socda, waxaana waxeelo soo gaartay gaariga shilka galay oo dhaqaaqi waayay.
Waxaa la hakiyay dhamaan gaadiidkii kale ee adeegsanayay khadkan fiilooyinka oo gaarayay 32 gaari, waxaana socda dadaalo looga hortagayo in uu mar kale dhaco shilkan oo kale.